DHEGEYSO-Goobaha loo dalxiistago oo kusoo badanaya magaalooyinka gobolka Nugaal. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Goobaha loo dalxiistago oo kusoo badanaya magaalooyinka gobolka Nugaal.
Luulyo 9, 2016 3:24 b 0
(July 09 2016)-Guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa ahaa indhawaalaba shaqsi aad ugu howlan muujinta bilicda iyo quruxda magaalooyinka Puntland, gaar ahaan mudane Tigay waxaa uu caan ku noqday in uu baraha bulshada ku faafiyo sawiro ka turjumaya nimcada taala dhulkeena, khayraadka dibiiciga ah, iyo goobaha loo dalxiis tago ee ku yaala deegaannada Puntland.
Dhawaan waxaa uu xarun loo dalxiis tago ka furay degmada Eyl ee gobolka Nuugaal, waxaana tillaabo la mid ah taas ay Ganacsato reer Garowe ah ka sameeyeen xaruntii horay loogu yaqiinay Darayle ee hadda loo bixiyay HIDO DHOWR.
Tigay ayaan ku waraysannay khadka taleefanka annigoo waydiiyay ahmiyada ay dadka u leeyihiin goobaha dalxiiska ee Eyl iyo Garowe laga sameeyay.
DHEGEYSO-Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo kadhacay magaalada Jubba.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Ciyaaraha ee sports news xarunta Garoowe 09 07 2016.